Waxyaabaha TSL ay soo bandhigtay waxay ku cusbooneysiineysaa xalka maqalkiisa Audio Monitorin iyo nidaamyada xakamaynta baahinta ee NAB NY 2019 | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerinka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » News » Waxyaabaha TSL ay soo bandhigtay waxay ku cusbooneysiineysaa xalka maqalkiisa maqalka iyo nidaamyada xakamaynta baahinta ee NAB NY 2019
Waxyaabaha TSL ay soo bandhigtay waxay ku cusbooneysiineysaa xalka maqalkiisa maqalka iyo nidaamyada xakamaynta baahinta ee NAB NY 2019
New York, Oktoobar 7, 2019 - TSL Products, naqshadeeye hormuud ah iyo soo saaraha xalka qulqulka baahinta baahinta, ayaa ku soo bixi doona maqalkiisi ugu dambeeyay iyo bixinta kontoroolka NAB NY 2019 (Booth N155). Astaantu waxay sii waddaa si ay u horumariso xalalkeeda si ay ula jaanqaado isbeddelka macaamiisha macaamiisheeda iyo kala-guurka dhanka qulqulka shaqada IP. TSL waxay iftiimin doontaa cusboonaysiinta barnaamijyadeeda kormeerka maqalka, oo ay ku jiraan aaladdeeda SAM-Q, PAM-IP iyo Khadadkeeda MPA1. Intaa waxaa u dheer, waxay ku soo bandhigi doontaa cusboonaysiinta barnaamijyadeeda xakamaynta baahsan ee baahsan iyo sidoo kale IP Control Buddy, Santuuqyada Meelkasta oo Interface ah iyo cusbooneysiinta Flashboard.
TSL waxay sidoo kale ku soo bandhigi doontaa cusboonaysiinta khadka tooska ah ee 'PAM-IP' iyo howlaheeda balaarinta ee ka baxsan la socodka maqalka iyo fiidiyowga. PAM-IP waxay sii wadaa inay dejiso heerka loogu talagalay kormeerayaasha maqalka ee 2022-6 iyo 2110. Wax qabadkeeda waxaa ka mid ah cabbiraadda codka, cabbiridda si buuxda loo habeyn karo iyo kormeer kanaal badan. Aqoonsiga muhiimada kontaroolka qalabka korantada ee kaabayaasha IP-ga, macaamiisha waxay hadda dooran karaan 'In-Band' ama 'Out-of-Band' si ay ula socdaan kormeerayaasha maqalka PAM-IP. Isticmaalka nidaamka xakamaynta xisbiyada TSL ama 3rd, ST-2110 iyo ST-2022-6 macaamiisha multicast ee PAM-IP ayaa hadda la go'aamin karaa iyadoo la adeegsanayo Ember +, NMOS ama TSL's RESTful API protocol. Sidoo kale in lagu muujiyo NAB NY waxay noqon doontaa sii-deynti ugu dambeysay ee TSL ee MPA1 qeybaheeda kala duwan ee la socoshada oo ay ku jiraan cabirka maqalka oo la hagaajiyay ee MPA1-SOLO-MADI iyo MPA1-SOLO-DANTE, iyo fikradaha guddiga hore ee fikradaha loogu talagalay MPA1-MIX-MADI. Xaruntu waxay sidoo kale bixisaa awoodaha xakamaynta ee la hagaajiyay iyada oo loo sii marayo SNMP ee dhammaan kormeerayaasha maqalka ee MPA1. Kormeerayaashan la isku halleyn karo oo la isku halleyn karo waxay awood u siinayaan kuwa isticmaala dhamaadka inay ku kormeeraan maqalka iyagoo leh kalsooni isla markaana qotodheer u ah 100mm qoto dheer, waxay si gaar ah ugu habboon yihiin codsiyada halka boosku ku badan yahay, sida xirmooyinka duullimaadyada iyo gawaarida OB.
Dhanka koontaroolka, TSL waxay soo bandhigi doontaa howlo cusub oo kala duwan oo ay ka mid tahay xakameynta mashiinka, meeleeynta iyo gudbinta taas oo qeyb ka ah adeegyadeeda xakameynta horumarsan iyadoo ay u mahadcelineyso Shabakada 'FSL Network' kontoroolha DNF. Cusboonaysiintaan waxaa ka mid ah Isdhaxgalka MOS ee ENPS iyo iNews si loo fududeeyo otomaatiga soo saarida qolka iyadoo loo oggolaanayo isticmaaleyaasha inay la wareegaan aaladda muhiimka ah ee ay ku tiirsan yihiin. Qalabka otomaatiga ee ciyaarta, macaamiisha ayaa hadda awood u leh inay qiime-ahaan wax ku ool ah oo si fudud u abuuraan nidaamyada aasaasiga ah ama taariikheynta / jaamacadda, oo leh xakameyn sahlan oo la isku halleyn karo oo ku saabsan aaladaha fiidiyowga muuqaallada iyo sawirada barnaamijka tooska ah. Intaa waxaa sii dheer, adeegsadayaashu hadda way maamuli karaan, ku wareejin karaan oo ay u qaybin karaan amarrada SCTE iyaga ama u maraya kantarool otomaatig ah oo lala socdo waqtiga dhabta ah ee la socoshada iyo ogeysiisyada markay dhacdo dhacdo.
TSL waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa tirokoobyo cusub oo caalami ah iyo baraagag ay ku jiraan, oo ay ku jiraan IP Control Buddy, iyo sidoo kale xariiqda sanduuqyada Meelkasta oo Wareega ah (AIBs). TSL's IP Control Buddy waa nidaam xoog badan oo is haysta oo xakameynaya GPI / O-, Serial- iyo aaladda IP-karti u leh. Ka soo kabashada hal ilaa afar badhamada, IP Control Buddy waxay sameyn kartaa ficillo fudud 'on / off' qaab ah ama kicin kara salvos adag, iyo cabirkiisa is haysta ayaa ka dhigaya mid ku habboon xirmooyinka xirmooyinka iyo howlaha wax soosaarka degdega ah. Taxanaha shirkadda ee AIB waxaa si gaar ah loogu talagalay A / V, raadiyaha, warshadaha iyo TV-yada baahiya suuqyada suuqyada, waxayna u oggolaanaysaa dadka isticmaala inay xidhaan nidaamyada ayna gaaraan waxqabadka ugu habboon iyada oo aan la fulin wax barnaamij ah. Maamulka maaraynta aaladda iyo dabacsanaanta furfuran, AIBs waxay bixiyaan ilaa 16 GPI / Os iyo wadooyin badan oo xakameyn aaladda, iyadoo AIB-4 ay sidoo kale bixineyso Ethernet, 2-way DTMF iyo modem dial-up. AIBs waxay gaadiidkooda GPIs iyo On-Air dhaadheer duulimaad ku tagtaa garoonka, meel kasta oo aad uga baahatid - magaalooyinka oo dhan, gobollada iyo xitaa qaaradaha - fog. Qaabeynta waxkasta oo la xakameynayo iyo la socodka codsi kasta waxaa lagu fududeynayaa barnaamijka 'free programmer' ee biraawsarka.
Intaa waxaa sii dheer, shirkaddu waxay aqoonsan tahay baahida sii kordheysa ee macaamiisha si ay u aragto macluumaadka qulqulka qotodheer waxayna u qorsheysay FlashBoard inay si aan kala go 'lahayn ula dhex gasho TSL ama nidaam kastoo xakameyn dhinac saddexaad ah. NAB NY, TSL waxay muujin doontaa ku darista dhowr astaamood oo ah muuqaalka FlashBoard, oo ay kujiraan nidaamka casriga ah iyo saacadaha adduunka, saacadaha wax soo saarka kor u kaca, hawada sare iyo muujinta iftiinka iftiinka, shaashadda shaashadda, muujinta waxyaabaha ku saleysan shabakadda iyo tiirarka fiidiyowga. .
In ka badan 30 sano, TSL waxay si toos ah ula shaqeysay wariyeyaasha adduunka hogaamiya iyo hal abuureyaasha nuxurka si ay u qaabeeyaan, u soo saaraan oo u suuq galiyaan xalal badan oo hawleed warbaahineed oo u adeega fududeynta howlaha ka dhex socda telefishanka telefishanka, fiilada, satellite, IPTV iyo warshadaha IT. Takhasus u leh kormeerka maqalka, nidaamyada xakamaynta warfaafinta iyo maaraynta awooda, TSL waxay hubinaysaa in xalalkeeda ay qanciyaan kana bataan shuruudaha ganacsiga, farsamada iyo howlaha ee ka jira IT-ga ku saleysan iyo socodka shaqo dhaqameed si ay uga caawiso macaamiisheeda inay hoos u dhigto qarashka, soo saarto dakhli iyo hagaajinta howlaha.
Pliant® Technologies 'CrewCom waxaa loo doortay Madaxweynenimada Daahfurka - February 24, 2021
Wada-hawlgalayaasha Marshall ee la socda CyanView si loo Ballaariyo Awooddeeda Kaamirada - February 24, 2021
Audio Broadcast Engineer Broadcast Engineering Control System Graham Chapman Prmoted toEditor dhexgalka ip MPA1 NAB NY 2019 Ka baxsan baabuur Broadcast PAM-IP SAM-Q Waran & Fallaaro TSL Products TV Technology TVU Networks Ultra HD Forum Video Engineer Shaqooyinka shaqada 2019-10-07
Previous: Telestream Wuxuu Soo Bandhigay Jaangooyooyinkii Ugu Dambeeyay ee Badeecada iyo Adeegyada Laga soo bilaabo Ingest illaa Bixinta Sugnaanta Tayada ee NAB NY
Next: RBS waxay u doorataa Nidaamka Xeebta leh ee Pebble-ka ee Automation-ka guud ahaan dhammaan xarumaha